detoxified အရက်သမားများတွင် ဦး နှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း (1994) - Your Brain On Porn
detoxified အရက်သမား (1994) တွင်ဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်၏ recovery
comments: လျှော့ချ cortex ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်စှဲတဦးလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ဒီလေ့လာမှုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းစွဲဟာမူမမှန်ဖြစ်စေသည်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း, ဇီဝဖြစ်စဉ်မူမမှန်များ၏လွှတ်တွေ့။
နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994 Feb;151(2):178-83.
Volkow, GJ ဝမ်, R ကို Hitzemann, JS မုဆိုး, je ခြုံ, G Burr နှင့် AP Wolf ကအဲန်ဒီ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန, Brookhaven အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်း, Upton, နယူးယော့ 11973 ။
Objective: နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဖြစ်သို့မဟုတ်အရက်အသုံးပြုမှု antedate စေခြင်းငှါမူမမှန်ကနေအရက်သမားတို့တွင်အဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အတွက်ဆုတ်ခွာ-related မူမမှန်ခွဲခြားရန်, စာရေးဆရာများအရက် detoxification စဉ်အတွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ပြန်လည်နာလန်ထူအကဲဖြတ်။
နည်းလမ်း - ဒေသတွင်း ဦး နှောက်ဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို positron ထုတ်လွှတ်ခြင်း tomography နှင့်နောက်ဆုံးသုံးရက်အကြာတွင်ရက်ပေါင်း ၈-၁၅ ရက်၊ ၁၆ ရက် ၃၀ ရက်နှင့် ၃၁-၆၀ ရက်တို့တွင်အရက်သောက်တတ်သောအထီး ၁၀ ယောက်တွင်တိုင်းတာခဲ့သည်။ အရက်၏။ အရက်သေစာ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်တန်ဖိုးများကိုအသက်အရွယ်နှင့်လိုက်ဖက်သောယောက်ျားကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၀ ယောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
ရလဒ်: ဦးနှောက်ဇီဝြဖစ် detoxification ကာလအတွင်းသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအချိန်မှတ်အကြားသော်လည်းမဒုတိယနှင့်တတိယအချက်များအကြားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသတွင်းအစီအမံအတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုပြန်လည်နာလန်ထူ 16-30 ရက်အတွင်းအများစုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းအကြံပြု, ရှိခဲ့သည်။ ဇီဝြဖစ်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာတိုးဟာတိုကျရိုကျဒေသများတွင် သာ. ကွီးမွတျခဲ့သညျ။ ပထမဦးဆုံးအကဲဖြတ်စဉ်အတွင်းအရက်သမား detoxification ၏အဆုံးမှာအရက်သမားဟာ Basal ganglia နှင့် parietal cortex အတွက်အနိမ့်ဆွေမျိုးဇီဝဖြစ်စဉ်တန်ဖိုးများအတွက်သိသိသာသာနိမ့်အကြွင်းမဲ့အာဏာနှင့်ဆွေမျိုးဇီဝဖြစ်စဉ်တန်ဖိုးများကိုပြသခဲ့သည်, နှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတစ်စုထက်အမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်ဒေသများတွင်သိသိသာသာနိမ့်ဇီဝြဖစ်ပြသသွားရမည်။ အဆိုပါအရက်သမားများထဲတွင်ပေမယ့်နှိုင်းယှဉ်အုပ်စုဟာတိုကျရိုကျအတွက်ဇီဝြဖစ်, parietal နှင့်ယာယီ Cortex left အဆိုးအရက်သုံးစွဲခြင်း၏အနှစ်နှင့်အသက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်မဟုတ်။
နိဂုံးချုပ်: ဒီလေ့လာမှုကအရက်ဆုတ်ခွာစဉ်ကဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးပြ detoxified အရက်သမား၏ Basal ganglia အတွက်မြဲနိမ့်ဇီဝဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်ပါရှိသည်။